bing + twitter = waqtiga dhabta ah raadinta | Martech Zone
Khamiista, Oktoobar 22, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Adam Yar
Microsoft waxay soo bandhigtay muuqaal cusub oo loogu talagalay baaritaanka baaritaanka bing- twitter-ka. Waxay ku taal bing.com/twitter horena waa u nooshahay. Sida laga soo xigtay Microsoft tani waa tallaabo weyn oo loo qaaday raadinta oo ku tiirsan xogta waqtiga-dhabta ah iyada oo laga soo horjeedo xiriiriyeyaasha la keydiyay. Caan ka ahaanshaha tweeter-ka ayaa sidoo kale saameyn ku yeelan doona natiijooyinka darajeynta.
Google si dhakhso leh ayey u raacday Microsoft (inta badan ma maqashid taas!) Oo waxay ku dhawaaqeen iyaga raadinta waqtiga dhabta ah ee twitter goor dambe oo maalintaa ah.
Awoodda wax lagu raadin karo waqtiga-dhabta ah ayaa dawo u ah shirkadaha mashiinnada raadinta waxaanan arki karaa halka ay ka kooban tahay wabiyada aadka loo jecel yahay ee warbaahinta bulshada ay ku siin karto gees tartan laakiin waxaan sidoo kale arki karay inay isku buuqayso natiijooyinka raadinta.
Marka laga eego aragtida suuq-geynta waxaan u maleynayaa inay fursad weyn u noqon karto shirkad xariif ku ah baraha bulshada si ay kor ugu qaadaan naftooda ama wax soo saarkooda. Maaddaama makiinadaha raadinta ay ku dhiseen awoodda RSS, tani waxay sidoo kale caddayn doontaa tartan aad u ballaaran - maadaama shirkaduhu awood u leeyihiin inay ka jawaabaan oo ay ka falceliyaan qoraallada dhabta ah ee tweets! Waa inaad abuureysaa tan digniin ah oo ku saabsan tartanka, warshadaha iyo shirkadaha isla marka natiijooyinku si toos ah u socdaan.
Maxaad ugu darin natiijooyinka twitter-ka natiijooyinka raadinta joogtada ah? Haddii ay tahay inaan tago aalad gaar ah oo raadinta raadinta natiijooyinka twitter-ka maxaa diidaya oo keliya inaan raadsado twitter-ka adoo adeegsanaya tweetdeck, Seemic ama macmiil kale oo desktop ah? Fikradaha?
Tags: afuunatiijooyinka ganacsigakamarad +cokesuuq-geynta suuqa
Riix 1 Hadaad Miisaaniyad Leedahay
Oktoobar 23, 2009 at 1:44 AM
Markaad isticmaasho raadinta Twitter-ka, Runtii waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko aaladda ka imaaneysa sii deynta macluumaadkan si loo baaro matoorada halka ay dadku ka dhisi karaan codsiyada koox saddexaad.
Oktoobar 23, 2009 at 4:45 AM
Waxaan u maleynayaa in waxa ugu xiisaha badan ee halkaan laga fiirsado ay tahay in natiijooyinka raadinta waqtiga-dhabta ah lagu kala saari doono iyadoo lagu saleynayo maamulka (retweets iyo # kuwa raacsan), tani waxay culeys badan saari doontaa ganacsiyada si ay u noqdaan kaqeybgalayaal firfircoon wadahadalka.
Ku baahinta farriimaha twitter-ka waxay noqoneysaa dhaqan aan khusayn. Saameynta dadka, dib udajinta mawduucaaga, dadku waxay kugu darayaan 'liistadooda' ama #FF waa meesha ay awooda oo dhami degan tahay.
Ereyga 'noqo mid ku habboon hadda' waa mantra cusub ee shabakadda.
Oktoobar 25, 2009 at 12:55 PM
“Waan ka xumahay!
Raadinta Bing Twitter laguma heli karo goobtan.
Haddii aad rabto inaad gasho Bing Twitter Search, u beddel aaggaaga Mareykanka. "